Havitrana fanoratana loko
tacmeds.com manome loko isan-karazany ianao. Azonao atao ny mitady ny loko rehetra ao amin’ity tranokala ity. Tranonkala iray izay manome loko maro amin’ny endrika sary, ny loko dia lasa zavatra manan-danja amin’ny fiainantsika. Manintona olona ho an’ny olombelona ny loko. Ankoatr’izay, ity tranonkala ity koa dia mampiseho endrika fanoratana trano sy sary hosodoko izay karama izay tsy mahaliana noho ny loko. Tsy amin’ny hoso-doko fotsiny, ny fanaka an-trano na ny hoso-doko amin’ny rindrina no manana fiovan’ny loko mahaliana.
Ataovy fotsiny ny fikarohana ao amin’ity tranokala ity, mahita sary hosodoko anatiny sy endrika anatiny. Ny aingam-panahy amin’ny hoso-doko amin’ny rindrina isan-karazany dia afaka mahatonga ny tranonao ho tsara tarehy kokoa sy malefaka hitoerana. Ny hevitra momba ny famolavolana izay vita tamin’ny haingon-trano mahavariana dia mety ho fitaomam-panahy anao amin’ny haingo trano. Tsy ampahany amin’ny trano iray ihany, fa koa mamolavola ny efitrano tsirairay sy ny haingon-trano. Ohatra, ny famolavolana fandroana miaraka amin’ny fandroana, trano fidiovana, mandro, hilentika, kabinetra, ary koa ny jiro matory sy ny haingon-trano rindrina ary ny fananganana valindrihana. Karazan-trano isan-karazany dia voarakitra ao anatin’ity tranokala ity, toy ny karazana klasika, tsotra, minimalist, kanto na haitraitra lafo. Miaraka amin’ny safidy famolavolana marika miaraka amin’ny laminasa antsipiriany dia mora kokoa ary mety ho fitaovana iray ijerenao amin’ny famaritana ny famolavolana sy loko mety ho an’ny tranonao.